Liling Xing Tai Long Special yodongwe Co., Ltd. lasekwa ngo-1997, ngokukodwa uphando kunye nophuhliso, mveliso umlilo kulingwa ngokuyinyibilikisa kunye cupel.
I-Lilling xing tairamic Coramic Couramic Couramic Couramic Couramic Couramic Couramic Couramic Imveliso yeMveliso ye-Alumramic, iMveliso yeCerico Ceramic, iMveliso yeCeramic yeCeramic, iDen Ceramic imveliso ye-ceramic. Eyona nto iphambili njenge-Alumna / i-ZirconIa Tube, i-Aluminia / Zircoy Deby, i-Alumcoria / Zircon Ibhola, i-Aluminia / Zircon Ibhola, i-Alumcoria / Zirconsia Brick , i-silicon carbide / igrafu / i-BN CHEADE, i-Silicon Carbide / i-i-i-i-i-i-i-ibhola, ipleyiti ye-SIC, ibhodi, i-PBN / BN Inxalenye yecandelo. Yamkele i-OEM kunye ne-ODM.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwizibane kunye nezibane, izixhobo zombane, iimveliso zokufudumeza, i-nozzle, iinxalenye ezizenzekelayo, zinxibe-impahla yokunganyangeki yezixhobo zokufakwa, njl.
I Inkampani ihlala inamathela kwimgangatho esemgangathweni, ubuchule kunye nophuhliso, ingqibelelo yophawu, ukukhusela kunye nokucinga kunye nenjongo yokuthengisa emva kwenjongo. Kwiminyaka edlulileyo, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kwilizwe lonke, kwaye zathunyelwa eJamani, i-United States, eFinland, iBrazil, iRussia, umgangatho weemveliso kwaye inkonzo inconyiwe kakhulu ngabathengi.
"Umgangatho ophezulu, ixabiso elikhethekileyo" Ngaba ulawulo lwethu lweTenet. Silindele ukubambisana nabantu basekhaya nabangaphandle, uphuhliso oluqhelekileyo!
Wamkelekile ukutyelela kwaye uphande kwinkampani yethu.
Akukho mda kubungakanani. Singasinika esona siphakamiso sinesisombululo kunye nezisombululo ngokwemeko yakho.
Luhlobo luni lwesiqinisekiso onabo?
Sine-ISO9001, i-O14001, i-PED, sgs
Ngaba uyamkela ishishini le-OEM?
Ewe sinikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM. Sithumele nje umzobo wakho ukuba unayo. Ukuba awunayo umzobo, usixelele umbono wakho, siya kukusebenzela umzobo.
Yintoni umgangatho wephakheji?
Iphakheji esemgangathweni yokuthumela kwelinye ilizwe okanye iphakheji ekhethekileyo ngokwemfuno yomthengi.
Iintsuku ezisi-7 zokusebenza kwiimveliso ezisemgangathweni kwiimveliso ezizezinye.
Ukuba iimveliso zinengxaki yomgangatho, uza kujongana njani?
Siza kunoxanduva kuzo zonke iingxaki zomgangatho.
Ndingazifumana iisampulu kumzi-mveliso wakho?
Ewe, isampulu ikhululekile, kodwa intlawulo yentloko yeyakho.
Liling Xing Tai Long Special yodongwe Co., Ltd. lasekwa ngo-1997, ngokukodwa uphando kunye nophuhliso, mveliso umlilo kulingwa ngokuyinyibilikisa kunye cupel.Iimveliso zisetyenziselwa uhlalutyo lwesinyithi oluxabisekileyo, ukuvavanywa kwemigodi, ukuvavanywa kwezimbiwa kunye nokunyanzela kwegolide. Izinto ezimbi ze-Assay zeShifys ziyiFireclay ezixutywe nezinye izinto zokwenza izinto, banokujamelana nobushushu ukuya kwi-1300 ℃. Banokuchasana ngokugqwesileyo ngokuchasene nohlaselo lwe-flux, ukhukuliseko, ukuqhekeza kunye nothuso lwe-thermal.Njengomvelisi onamandla ovelisileyo we-assay ocekeceke ngeCupel, sine-7000 yoma-7000 isikwere isakhiwo semizi-mveliso entsha yomzi-mveliso kunye nomgca ozenzekelayo wemveliso.Inkampani ihlala ilandela ukusinda komgangatho, ubuchule kunye nophuhliso, ukuthembeka kophawu, ukukhusela kunye nokucinga kunye nenjongo yenkonzo yasemva kwentengiso njengenjongo. Kwiminyaka edlulileyo, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kwilizwe lonke, kwaye zathunyelwa eJamani, e-United States, eBrazil, iRussia, uMgangatho ongaphezulu kwe-20, iNkonzo inconyiwe kakhulu ngabathengi."Umgangatho ophezulu, ixabiso elikhethekileyo '' lulawulo lwethu. Silindele ukubambisana nabantu basekhaya nabangaphandle, uphuhliso oluqhelekileyo! Wamkelekile ukutyelela kwaye uphande kwinkampani yethu.